चितवनमा कांग्रेसले सार्यो यी व्याक्तिलाई, रेणुलाई यस्तो अफर ! « Ok Janata Newsportal
चितवनमा कांग्रेसले सार्यो यी व्याक्तिलाई, रेणुलाई यस्तो अफर !
काठमाडौं । आइतबार बसेको नेपाली काँग्रेसको चितवन जिल्ला कार्य समिति बैठकले भरतपुर महानगरपालिका मेयर पद नछोड्ने निर्णय गरेपछि यहाँको राजनीति सघन बनेको छ ।
काँग्रेसले मेयरमा आफ्नो दाबी नछाड्ने निर्णय गरेसँगै अब वर्तमान मेयर रेनु दाहालले के गर्लिन् भन्ने चासो बढेको छ । माओवादी नेतृ दाहाल पनि गठबन्धनका तर्फबाट मेयरकी दाबेदार हुन् ।
त्यो स्थितिमा ६ वटा महानगरपालिकामध्ये काँग्रेसले विराटनरगर र ललितपुरसहित एमालेले जितेको काठमाडौंसमेत लिने अनि भरतपुर माओवादीलाई छाड्ने केन्द्रमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । पोखरा एकीकृत समाजवादी र वीरगञ्ज जसपाले दाबी गरेका छन् । यसरी केन्द्रमा होमवर्क भइरहेकै बेला चितवन काँग्रेसले भरतपुरको मेयरसमेत आफैंले पाउनुपर्ने दाबी गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेस चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘चितवन जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले केन्द्रको पाँच दलीय संयन्त्रलाई अन्य जिल्लामा जस्तै निरन्तरता दिइने निर्णय ग¥यो । तर, यसको बटमलाइन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काँग्रेसको हुनुपर्नेछ ।’
चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को गृहजिल्ला समेत हो यही कारण भरतपुर महानगरको मेयर पुनः माओवादीले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ ।
​देशैभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादको केन्द्र भरतपुर महानगर बन्न पुगेको छ । प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र हुनु र उनकी छोरी रेणु दाहाल भरतपुर मेयर भएकाले चितवन चर्चामा आएको हो ।
विगतको चुनावी नतिजा हेर्दा चितवनमा माओवादी अंकगणितीय हिसावले तेस्रो स्थानमा छ । ०७४ को चुनावमा भएको गठबन्धनलाई लिएर पनि चितवन काँग्रेसमा असन्तुष्टि देखिको थियो, जुन अहिले फेरि सतहमा आएको छ । ०७४ मा माओवादीले मेयर र काँग्रेसले उपमेयर लिने गरी गठबन्धन भएको थियो ।
स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धन गरेर जाने सहमती भएपनि कुन मोडल अपनाएर जानेमा टुंगो लागेको छैन। अध्यक्ष प्रचण्ड सहित एकीकृत समाजवादी पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलले यसअघि जुन पार्टीले जितेको त्यसलाई दिएर चुनावी तालमेल गर्ने मत राखेका छन्।
अरु एमालेले जितेका स्थानीयतहमा गठबन्धनमा सहभागी दलले भागवण्डा गरेर लिने उनीहरुको अडान छ । त्यसमा काँग्रेसले असहमति जनाएको छ ।